Vaovao - Nisy tantara novonoina Coronavirus tampoka nanakorontana ny varotra manerantany.
Nisy tantara novonoina Coronavirus tampoka nanakorontana ny varotra manerantany. Betsaka ny mpanjifa no manahy fa tsy manana injeniera hametraka na handrava ny milina novidian'izy ireo avy any Chine. Eny, marina fa mpamatsy maro no manana an'io olana io, fa tsy eto amin'ny orinasanay, satria ankoatry ny injeniera sinoa dia manana ihany koa izahay injeniera indianina tena za-draharaha, ary injeniera jordanianina. Tamin'ny volana novambra lasa teo dia nandeha tany Yemen ny injenieranay karana mba hametraka tsipika famokarana EPS Shape Molding Machine. Ny mpanjifa dia nividy ny EPS SHAPE MOLDING MACHINE LINE manontolo, ao anatin'izany ny EPS BATCH PREEXPANDER, SILOS, EPS SHAPE MOLDING MACHINE, EPS MOLD ary ny FITAOVANA FANAMPINY MAFY. Nandeha moramora ny zava-drehetra nandritra ny fametrahana azy, nanampy ny mpanjifa hanomboka ny famokarana ara-potoana.
Ny orinasan-tsenanay any Yemen dia mamokatra biriky fampidirina amorom-boromailala EPS, izay ny sosona fototra an'ny biriky sandwich vita amin'ny EPS, biriky beton-EPS-beton. Ity dia vokatra malaza be any amin'ny firenena Afovoany Atsinanana. Nanafatra anay ny client Yemen nefa tsy nitsidika an'i Shina. Tamin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tserasera dia nohazavainay ny mombamomba ny masinina EPS sy ny tombony azonay, nasehonay azy ny horonantsarin'ireo milina EPS miasa, nohazavainay tamin'ny fomba matihanina ny fanontaniana ara-teknika rehetra nataony, nanaovanay ny famotopotorana ny vidin'ny famokarana ho azy ireo mba hahafahan'izy ireo manao ny tatitra fandinihana azo atao. Taorian'ny fifandraisana roa volana dia nanapa-kevitra ny hiara-miasa aminay izy ireo. Saingy satria io no fiaraha-miasa voalohany ary tsy nifankahita intsony izahay, nomen'ny mpanjifa maso ivoho maso maso maso maso maso iray hafa aorian'ny famokarana, ary zahao ireo kaontenera mamaky eo amin'ilay toerana. Ny fizahana, manomboka amin'ny fonosana ireo vokatra ka hatramin'ny fametahana ireo masinina ao anaty kaontenera dia nandalo soa aman-tsara ny fizahana azy ireo. Mazava ho azy, tsy toy izany ny fotoana voalohany fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo amintsika. Miarahaba ny mpanjifa rehetra izahay mba hahita andrimpanjakana fahatelo hijerena.
Amin'ny maha-mpamatsy milina EPS manana traikefa 15 taona mahery amin'ny indostrian'ny EPS, mifototra amin'ny foto-kevitry ny kalitao voalohany sy ny mpanjifa voalohany, dia manomboka amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa hatrany izahay ary mamaha olana ho an'ny mpanjifa. Avelao handresy ny fiaraha-miasa ataontsika! Miarahaba antsika namana izay mikasa ny hanokatra orinasa EPS na hanavao ny milina EPS.
Raha mila milina EPS ianao dia mifandraisa aminay, misaotra!